AKHRISO:-Afar Xisbi Siyaasadeed ee dalka oo war kasoo saaray go’aanadii ka soo baxay Shirkii Kismaayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qoraal ka soo baxay afarta Xisbi Siyaasadeed ee dalka ka jir ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay dhaweeyeen Go’aankii ka soo baxay Shirkii Madaxda Dowlad Goboleedyada dalka,kaasi oo shalay lagu soo gebagabeeyay Magaalada Kismaayo.
Xisbiyada Siyaasadeedyada ee kala ah Wadajir,Kulan,Daljir,Xisbiga Nabada iyo Kutlada Horu-socod,ayaa waxa ay sheegeen inay la qabaan walaaca Siyaasadeed oo ay muujiyeen Madaxda Dowald Goboleedyada.
Shirkii Magaalada Kismaayo ay ku yeesheen Madaxda Dowlad Goboleedyada dalka ka jira Magaalada Kismaayo ayaa waxa laga soo saaray qodobo ay kamid ahaayeen in Madaxda maamul Goboleedyada dalka ay hakiyeen xiriirkii ay la lahaayeen dowlada dhexe ee Soomaaliya.
Guddoomiye Mursal Sheekh oo kulan la qaatay Khubaro ka socotay Hay’adda UNDP + Sawirro